Sina manamboatra filamente borosy indostrialy
Ny filamenta borosy indostrialy dia manana ny toetran'ny fiainana lava, ny tsy fahampiana, ny endrika tsotra, ny fahombiazana avo lenta, ny faharetana, ny fanoherana ary ny hamafin'ny haavo.
Filamenta PBT avo lenta sy miloko ho an'ny borosy nify
Ny filamentan'ny borosy pbt dia manana hamafin'ny fihenam-bidy, ary noho ny fanoherana asidra tsara sy ny fihenan'ny hamandoana ambany, dia mety amin'ny tontolo iainana miasa mando izy io. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanodinana borosy nify, borosy indostrialy ary borosy fanadiovana, borosy poloney, sns.
Filamenta PBT miaro bakteria ho an'ny borosy nify
Ny fahamendrehan'ny PBTfilament dia tsara kokoa noho ny tariby borosy nilona, ​​fa ny fanoherana ny abrasion dia tsy tsara noho ny 610. Ny fahombiazan'ny PBT dia malefaka kokoa, ary mety indrindra amin'ny fanadiovana sy ny fandotoana ireo faritra tsara, toy ny fanadiovana ny atin'ny fiara.
PBT sy PET Filament amin'ny fanaovana borosy nify
filament biby sy pbt Ny volo somary malefaka sy mafy, mahazaka hafanana ambony, fanarenana miondrika mahery, malefaka ary mahazaka akanjo, tsy mora vaky sy simba, ary fiainana maharitra
Filamentana PET plastika ho an'ny borosy ao an-trano
Ho fanampin'ny fananan'ny PBT, ny PET dia manana ireto toetra manaraka ireto: tanjaka sy hamafisana; fanoherana ny havizanana, fanoherana ny fifandonana, fanoherana simika ary fanoherana ny hafanana
Filamentana borosy indostrialy amin'ny fanaovana borosy fanadiovana
Ny filamentan'ny borosy indostrialy dia manana fanoherana mahery vaika sy avo ary henjana avo, izay manome ny filamentan'ny borosy miaraka amin'ny fitoniana miavaka, ny fanoherana, ny fanoherana ny harafesina, ny fiovana sy ny fahanterana ary ny fiainana misy ny filamentan'ny borosy dia mihoatra ny eritreritrao.